Mikarakara ny milina fikarohana ve ianao raha mampiasa Drupal? | Martech Zone
Rafitra fitantanana atiny sy SEO
Ohatrinona ny Content Management Systems (CMS), toy ny WordPress, Drupal, Joomla!, milalao anjara fikarohana Optimization (SEO)? Mazava ho azy fa ratsy ny famolavolana tranokala (tsy url madio, votoaty ratsy, tsy fampiasana anarana an-tsaha sns) amin'ny CMS toa azy Drupal dia hisy fiantraikany amin'ny SEO (fitaovana lehibe ampiasaina amin'ny fomba ratsy). Fa ny rafitra fitantanana atiny ve dia mampindrana SEO tsaratsara kokoa amin'ny hafa, raha vita ny fomba fanao tsara hafa? Ary, ahoana ny fomba fampifangaroana ireo rafitra (oh: WordPress na bilaogy Drupal manohana a Shopify tranonkala) misy fiantraikany amin'ny SEO (heverina indray fa manaraka ny fanao SEO tsara hafa)?
Raha ny fijerin'ny motera fikarohana dia tsy misy mampiavaka an'i Drupal, WordPress, na Shopify. Alohan'ny hahavoa ahy amin'ny "Andraso kely", avelao aho hanazava. Ny motera fikarohana dia mijery ny HTML natolotra azy ireo rehefa mandady rohy izy ireo. Tsy mijery ny angon-drakitra ao ambadiky ny tranonkala izy ireo ary tsy mijery ny pejy admin ampiasaina hanamboarana ny tranokala. Ny motera fikarohana no jerena dia ny HTML novokarin'ny rafitra fitantanana atiny.
Ohatra: Rehefa mampiasa Drupal ianao dia tsy maintsy misafidy ny handrehitra URLS madio. Tsy mila mampiasa URLS madio ianao, fa rehefa manao izany dia mahazo URL azon'ny olombelona iray (oh: ohatra: http://example.com/products?page=38661&mod1=bnr_ant vs http://example.com / kevitra /-barotra). Ary, eny, ny URL madio dia afaka manampy ny SEO.
Ohatra iray hafa: Drupal, through its Pathauto Module, dia hamorona URL misy dikany miorina amin'ny lohatenin'ny pejy. Ohatra, ny pejy mitondra ny lohateny hoe "10 fahavitrihana fahavaratra ho an'ny zanakao" dia hahazo URL avy hatrany http://example.com/10-summer-activities-for-your-kids. Tsy mila mampiasa Pathauto ianao fa tokony hanampy azy io hanamora ny famakiana ny URL ny pejy URL.
Ohatra farany: Sarintanin'ny tranonkala manampy ny motera fikarohana hahafantatra izay ao amin'ny tranokalanao. Na dia azonao atao aza ny mamorona (ug) sarintany tranokala ary mandefa izany any amin'i Google na Bing, dia asa mifanentana kokoa amin'ny solosaina izany. Drupal ny XML Sitemap Module dia tsy maintsy ananana satria mamokatra sy mitazona ireo rakitra sarintany an-tranonkala ary manome ny fahaizana mandefa azy ireo amin'ny motera fikarohana.
Google na Bing dia tsy dia liana loatra raha mampiasa Drupal ianao na tsia, ny hany avoakan'izy ireo dia ny fivoahan'ny Drupal. Saingy mila mitandrina ianao amin'ny fampiasana Drupal, satria fitaovana iray manamora ny fizotry ny famoronana HTML sy URL miaraka amin'ny SEO.
Sasana kely… Fitaovana fotsiny i Drupal. Hanome ireo fiasa sy fampiasa ilaina hamboarina sy hitantanana tranokala izy io. Tsy hanoratra lahatsoratra tsara ho anao izy io. Anjaranao ihany izany. Ny zavatra voalohany azonao atao mba hitaomana ny laharan'ny SEO dia ny fananana vaovao voasoratra tsara, misy dikany amin'ny lohahevitra, ary noforonina lalandava.
Tags: CMSrafitra fitantanana atinydrupalfanamafisana ny motera drupaldrupal seoSEO
ChaCha + iPhone: Fanairana, Jeografia, valiny, fizarana
Politikan'ny Google Ads - Araho ireo fitsipika ireo!
Apr 26, 2011 ao amin'ny 9: PM PM
Marina tokoa ny teninao ry John… TSY miraharaha izay CMS-nao ny milina fikarohana. Na izany aza, rehefa niara-niasa tamin'ny rafitra fitantanana votoaty maro aho, dia afaka milaza aminao aho fa misy rafitra tranainy maro eny an-tsena izay tsy manana ny endri-javatra ilaina amin'ny fanatsarana azy ireo tanteraka. Ny fahafahana manavao robots.txt, sitemaps.xml, ping ny motera fikarohana, fandrafetana pejy (tsy misy fandrafetana latabatra), fanatsarana ny hafainganam-pandehan'ny pejy, fanavaozana ny angona meta… dia ho hitanao fa maro ny rafitra fitantanana votoaty no manery ny mpampiasa azy. Vokatr'izany, ny mpanjifa dia miasa mafy amin'ny votoaty izay tsy ampiasaina tanteraka.
Apr 28, 2011 ao amin'ny 12: PM PM
Tena marina ianao ry John. Mahita fanontaniana be dia be ao amin'ny Quora sy ny hafa aho hoe iza amin'ireo CMS no tsara indrindra ho an'ny SEO. Ny valiny dia momba ny rafitra fitantanana votoaty vaovao izay afaka manamboatra URL madio sy mampiasa fitaovana maro izay tian'ny milina fikarohana ampiasaina.
@Doug – marina koa ny anao. Ny rafitra fitantanana votoaty taloha dia matetika tsy manana fahafahana miditra amin'ny SEO.
Jun 19, 2011 ao amin'ny 1: 27 PM
Amin'ny toe-javatra sasany, na ny CMS maoderina aza dia mety hisy fiantraikany ratsy, na farafaharatsiny, tsy dia tsara loatra amin'ny SEO.
Joomla, ohatra, dia manana rindran-drafitra hamoronana famaritana meta manerana ny tranokala izay hampiharina amin'ny pejy rehetra izay tsy misy mpanoratra mamorona famaritana meta mahazatra. Izany dia nahatonga ny sasany amin'ireo mpanjifako hihevitra fa tsy mila mamorona famaritana natao ho an'ny pejy izy ireo.
Ho an'ny mpanoratra votoaty efa za-draharaha dia tsy olana izany. Na izany aza, ny rafitra fitantanana votoaty rehetra dia mampidina ny bar ho an'ny mpanoratra, ahafahan'ny mpanoratra tsy dia za-draharaha hanome ny votoatiny manokana, tsy mahafantatra ny olana momba ny fanatsarana.
21 Oktobra 2011 à 1:10
Ny CMS dia mamoaka ny HTML ka mazava ho azy fa misy fiantraikany amin'ny SEO. Drupal dia fangirifiriana tanteraka hamboarina araka ny tokony ho izy ho an'ny SEO, ho an'izay rehetra azonao atolotra. xml sitemaps, URL namana (miverina foana amin'ny / node), URL tsy miankina / lohatenin'ny pejy / lohateny, img alt tags, bilaogy (aza atomboka, tsy misy na inona na inona ao amin'ny WP ny bilaogy amin'ny Drupal).
Tianay ny Drupal amin'ny tranokala lehibe, saingy tsy mahafinaritra ny SEO'ify. WP dia mora kokoa amin'ny astronomia.